Endrika Sarimiaina Manaitaitra Filàna No Endrika Manambina Tsy Ofisialin’ny Mpanivan’ny Governemantan’i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2017 0:55 GMT
Niseho vao haingana tao amin'ny saritatra fohy nozarain'ny Roskomnadzor tao amin'ny media sosialy ilay izy, taorian'ny nibahanan'ny fitsaràna Rosiana ny lahatsary mampiseho bibilava nilatsaka avy ao anaty fiara, satria nolazaina ho misy torolalana momba ny famonoantena ilay lahatsary, hoy ny tatitry ny vohikalam-baovao TJournal.
Raha ny fahitàna azy dia nanaitra hatramin'ireo tomponandraikitra miasa ao amin'ny Roskomnadzor ilay fanapahankevitra, izay nilaza fa tratran'ny “fahatairana” tokoa izy ireo taorian'ny nandrenesany ilay didy nivoaka. Tao amin'ny Vkontakte, nandefa sarimiaina ilay masoivoho, niseho ho Roskomnadzor-chan misavorovoro saina amin'ireo fisalasalàna mikasika ny lojikan'ny fitsaràna.
Tamin'ny voalohany, an'ilay mpanao kanto, Dmitry Serebryakov, izay mamoaka taokanto amin'ny anarana hoe “Flick the Thief” ilay endrika mpanjakazaka. Any anatin'ireo sarimiainany, zoro ambany no anehoana an'i Roskomnadzor-chan amin'ny ankapobeny, indraindray mitondra karavasy manify. Fatotra roa misy ny fangon'ny Roskomnadzor no mamihina ny volony, ary mijery matetika ivelan'ny solosaina izy, sahala amin'ny matoatoa ao anaty milina. Miseho matetika ho toy ny maherifo ihany koa izy.
Nalaina lasitra avy amin'ny sarimiaina mahatsikaiky iray nipoitra telo taona lasa izay, nanomezam-boninahitra an'ilay Krimeana Mpampanoa Lalàna, Natalia Poklonskaya, i RKN-chan, izay fantatra tamin'ny hoe “Nyash Myash” ilay sarisariny natao mahafatifaty sy manaitaitra filàna. Ny tena zava-nisy, efa naneho andian-tantara fifamenoana mihitsy aza ny Flick the Thief.
Misy sarimiaina iray hafa mampiseho azy manana nofy mikasika firaisana mikasika ny Snegurochka (izay manampy an'i Mopera Frost mandritra ny fialantsasatry ny ririnina). Manontany sady manadaladala an'i RKN-chan izy raha niasa tsara izy tamin'ity taona ity, sady manala ireo akanjony. Rehefa afaka ireo akanjony, mbola misy ny fangon'ny Roskomnadzor ihany koa ireo akanjo anatin'i RKN-chan.
Ao amin'ireo andiany hafa, miditra amin'ireo faniriana mikasika ireo kilalao fampiasa amin'ny firaisana izy ary ireo lohahevitra maro natao ho an'ny olondehibe izay mazava be fa miantso ireo 8.200 mpanaraka ny Flick the Thief voasoratra anarana ao amin'ny Vkontakte.